Global Voices teny Malagasy · 5 Desambra 2008
05 Desambra 2008
Tantara tamin'ny 05 Desambra 2008
Mozika05 Desambra 2008
YouTube izao no mikarakara tetikasa vaovao ho fiaraha-mietana: Manasa ny mpahay mozika manerantany ity orinasa ity mba halaina feo (sy sary) amin'ny fananganana orikesitra saifônika avy amin'ny vazantany efatra virtoaly voalohany. Manana fotoana hatramin'ny faha28 ny volana janoary 2009 ho avy izao na ny mpankafy tsotra na ny matihanina amin'ny...
Fahasalamàna05 Desambra 2008
Amerika Latina05 Desambra 2008
Ahiana hofoanan'ny fitondrana mahefa any Kiobà ny fihaonan'ny mpamaham-bolongana, efa nokarakaraina ho am-bolana izay ary 25 no efa nilaza ny hanatrika izany, izay kasaina hatao ny 6 desambra (sabotsy) ho avy izao satria heverina ho "manohitra ny revolisiona" (contre-révolutionnnaire). Izany vaovao izany moa dia notsoahina avy tamin'ny dinika nifanaovan'ny mpiasan'ny...
Amerika Avaratra05 Desambra 2008
Mpamaham-bolongana Ezypsiana iray antsoina hoe Wael Abbas no nilaza tao amin'ny bolongany fa nolaviny ny fanasana hihaonana amin'ny (filoha Amerikana George Herbert Walker) Bush. Nandika ny lahatsorany avy amin'ny teny arabo i Marwa Rakha.
Ejipta05 Desambra 2008
Voasariky ny tantaran'ny famonoana olona mampihoronkoditra iray indray i Ezypta, mpianatra any amin'ny anjerimanontolo roa ireto nisy namono teny an-tohatra tany amin'ny tanànan'ny 6 oktobra (mampahatsiahy an'i 67ha lahy izy izany!) fivondronan'i Sheikh Zayed ireto. Zanaka vavin'ny mpihira Maraokana Laila Ghofran ny iray tamin'ireo novonoina. Ity vono olona ity dia...
Tselatra · Madagasikara05 Desambra 2008